बुधबारको समाचारले वीर अस्पतालका अहेव पनेरुलार्इ तनाव « Pahilo News
बुधबारको समाचारले वीर अस्पतालका अहेव पनेरुलार्इ तनाव
प्रकाशित मिति : 10 August, 2016 2:06 pm
२६ साउन । बुधवार मध्यान्ह १२ नयाँबानेश्वरस्थित् बुधवार साप्ताहिकको कार्यलयमा रहेको ०१–४७८६२५२ टेलिफोनमा घण्टी बज्यो । उक्त साप्ताहिका पत्रकार उमेश सुवेदीले नमस्कार बुधवार साप्ताहिक भन्दै फोन रिसिभ गरे ।
फोन गर्ने ब्यक्तिले आजको अंकमा वीर अस्पतालको राम्रो समाचार लेख्नु भएछ नी ? भन्दै प्रश्न गरे ,पत्रकार सुवेदीले सहज तरिकाले हजुर राम्रो छ भन्नसम्म के भ्याएका थिए उता बाट एकोहोरी रुपमा गालीको बर्षा भयो ।
तपाई को ? तपाइको सम्पादक कहाँ छन् ? समचार लेख्ने को ? मलाई फोन नगरेर समचार लेख्ने ? पत्रकारीताको धर्म के हो थाहा छैन ? खाते पत्रिकामा जेपायो त्यही लेख्ने ? कति चन्दा चाहियो ? एमालेले अस्पतालमा कार्यक्रता भर्ति गर्ने अनि कांग्रेस पार्टी र मलाइ जोडेर समाचार लेख्ने ? भन्दै तथानाम् गाली गरे , त्यसकाे जवाफ दिन नपाँउदै फोन काटियो ।
सुवेदी अलमल्ल परे, उनले सम्पfदकलाई फोनआएको जानकारी गराउन नपाँउदै फेरी फेरी फोन आयो, फोनमा सोधियो- पत्रिकाको अफिस कहाँ हो ? सुवेदीले उत्तर दिए- बाँनेश्वर । जवाफमा फोन गर्ने ब्यक्तिले कडा स्वरमा भने-अव के गर्नु पर्छ त्यही आएर हिसाव किताव गारौँला । यति भनेर उनले फोन राखिदिए,
समचार लेखेकै अाधारमा बुधबार पत्रिकाको कार्यलयमा फोन गरेर धम्क्याउने , अश्लिल शब्द प्रयाेग गरेर गालिगलौज गर्ने अरुकोही थिएनन् गरिब तथा असहायहरूलाई निःशुल्क उपचारको सिफारिस गर्ने वीर अस्पताल समन्वय शाखाको प्रमुख अहेव टीका पनेरू थिए ,उनको बारेमा बुधबार सप्ताहिकले आजको अंकमा यस्तो समाचार लेखेकाे थियाे ।
वीर अस्पतालमा कनिष्ठकै जगजगी
काठमाडौं । मुलुककै सबैभन्दा जेठो र साधनस्रोत सम्पन्न भएर पनि अस्तव्यस्त व्यवस्थापनका कारण थिलथिलो भएको वीर अस्पताल पछिल्लो समय झनै भद्रगोल भएको छ । बिग्रेको घरको भत्केको चाला भनेझैं अहिले अस्पताललाई लथालिङ पार्न रजिस्ट्रार डा. किरण मानन्धर लागेका छन् ।
खगराज अधिकारी स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा भागबन्डाका आधारमा कांग्रेसको कोटाबाट रजिस्ट्रार हुन पुगेका मानन्धरले अहिले अस्पताललाई अस्तव्यस्त पारेको बताइन्छ । त्यसो त दुई वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक भएर आइतबार मात्र पदावधि सकिएका डा. स्वयंप्रकाश पण्डितले पनि अस्पताल लथालिंग पार्न ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
उनले आफू जाँदाजाँदै अस्पतालका नवौं तहका कनिष्ठ चिकित्सक डा. भूपेन्द्र बस्नेतलाई कार्यकारी निर्देशकाका लागि निमित्त तोकेका छन् । अस्पतालमा ११औं तहका अन्य वरिष्ठ चिकित्सकहरू डा. हरिशचन्द्र उप्रेती, डा. ढुण्डीराज पौडेल र डा. राजेन्द्र अग्रवालहरू हुँदाहुँदै नवौं तहका बस्नेतलाई दलगत रूपमा कांग्रेसप्रति झुकाव राख्ने भएकै कारण निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको बताइन्छ ।
यो निर्णयबाट अन्य वरिष्ठ चिकित्सकहरू रुष्ट भएका छन् । त्यति मात्र होइन, उपकुलपति डा. गणेशमान गुरुङले तोक्नुपर्नेमा गुरुङ नभएको मौकामा रजिस्ट्रार मानन्धरमार्फत काम फत्ते गरिएको बताइएको छ । त्यसो त डा. बस्नेत अन्य वरिष्ठ चिकित्सकहरूको विद्यार्थी भएकाले पनि उनीहरूले बस्नेतलाई कार्यकारी निर्देशक स्वीकार गर्न नैतिक रूपमा संकट पर्ने बताइन्छ ।
बस्नेत विद्यार्थीका रूपमा पढ्दै एसोसिएट प्रोफेसर भएका व्यक्ति हुन् । उनी कार्यकारी परिषद्को सदस्यसमेत हुन् । यस विषयमा भर्खरै अवकाश पाएका कार्यकारी निर्देशक डा. पण्डितलाई जिज्ञासा राख्दा ‘कार्यकारी निर्देशकका लागि बहालवाला हुनुपर्ने र प्राध्यापक हुनुपर्ने तर कुनै तहको बाध्यता नरहेको’ डा. पण्डितले बताए । उनले भने– ‘मैले बनाएको होइन, भीसीले बनाएको हो ।’
अहेवलाई शाखा प्रमुख
यता, जाँदाजाँदै केही दिनअघि खरिदारसरहको मान्छेलाई शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर कार्यकारी निर्देशक डा. पण्डित सबैको आलोचनाका पात्र भएका छन् । गरिब तथा असहायहरूलाई निःशुल्क उपचारको सिफारिस गर्ने समन्वय शाखाको प्रमुख अहेव टीका पनेरूलाई दिइएको छ । कम्तीमा अधिकृत वा सोसरहको मान्छे उक्त समन्वय शाखा प्रमुख रहनुपर्नेमा डा. पण्डितले पनेरूलाई कांग्रेसनिकट भएकै कारण उक्त महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको बताइन्छ । गोर्खा घर भएका उनले असहाय र बिरामीको अवस्था हेरी सहुलियतका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेमा कांग्रेसका कार्यकर्ता र नेताहरूको मात्र कुरा सुन्ने र बिरामीका आफन्तसँग कमिसन लिएर मात्र सिफारिस गर्ने गरेको एक पीडितले बताए । उनलाई यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन पटकपटक फोन गर्दा उनले उठाएनन् ।